ကျမ ရဲ့ ဘာသာရေး ခံယူချက် နဲ့ နိုင် ငံရေး အမြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျမ ရဲ့ ဘာသာရေး ခံယူချက် နဲ့ နိုင် ငံရေး အမြင်
Posted by မိုချို on Jun 20, 2013 in Creative Writing, Politics, Issues, Science & Religion | 22 comments
ကျမ က သရဏဂုံ တည်ဆဲ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ ရတနာ ၃ ပါး ကို ကိုး ကွယ် ဆည်း ကပ် ပါတယ်။
အဲ လို ကိုး ကွယ် တဲ့ နေရာ မှာ မြတ်စွာ ဘုရား ရှင် ကို ရင် ထဲ က လာ တဲ့ ယုံ ကြည် မှု မျိုး နဲ့ ကို ကိုး ကွယ် ပါတယ်။ တန်ခိုး ရှင် ၊ ဖန်ဆင်း ရှင် တစ်ယောက် လို ကိုး ကွယ် တာမျိုး မဟုတ်ပဲ ၊ လောက အမှန်တရား နဲ့ ထပ်တူ ကျတဲ့ တရား တော် တွေ ရဲ့ ပိုင်ရှင် အဖြစ် နဲ့ ဘုရား ရဲ့ ဂုဏ်တော် တွေကို ကြည်ညို ပြီး ကိုး ကွယ် တယ်။ ဒီခေတ် သိပ္ပံ ပညာ ရှင် တွေ အထောက် အကူ ပစ္စည်း တွေ သုံး ပြီး မှ သိ နိုင် ကြ တာ တွေ ကို ကျ မ တို့ ဘုရား က ကိုယ် ပို င် ဥာဏ် အမြင် နဲ့ ထွင်း ဖောက် သိမြင် ခဲ့ ပြီး ဖြစ် တာတွေ သိရ ဖတ်ရ တဲ့ အချိန် မှာ အတိုင်း မသိ ကြည် နူး မိတယ်။ လောလောလတ်လတ် ဥပမာ ပြောပြ ပါမယ်။ သန္ဓေ သား ကြီး ထွား ပုံ အဆင့် ဆင့် ကို သိချင် လို့ ဂူဂယ် မှာ ပုံ နဲ့ တကွ ရှာ ဖတ် ကြည့် ပါတယ်။ သန္ဓေ အောင် ပြီး လို့ အဆင့် ဆင့် ဖြစ်တည် လာ ပြီး ၅ ပတ် မြောက် မှာ ခေါင်း ၊ ခြေ၊ လက် စတဲ့ အရာလေးတွေ ဖြစ်လာ တာ ကို တွေ့ ရတယ်။ ဒါ ကို ကျမ တို့ ဘုရား ရှင် က ပဋိသန္ဓေ စိတ်နဲ့သန္ဓေ တည်ပုံ အဆင့် ဆင့် ကို ရှင်းလင်းဟောကြား တဲ့ အခါ မှာ ပဋိသန္ဓေ ၅ ပတ် မြောက် မှာ ခတ်မ ၅ ဖြာ စဖြစ် တယ် လို့ ဟောခဲ့ တယ်။ ထွင်း ဖောက် သိ မြင် နိုင် စွမ်း တဲ့ ဘုရား ရှင်ရဲ့ ဥာဏ် တော် ကို ကျမ မှာ ကြည်ညို လွန်း လို့ မျက် ရည်တောင် ၀ဲ ရ တယ်။ ဒီလို ဘုရား ရှင်ရဲ့ သာသနာ မှာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် ဖြစ် ရတဲ့ အတွက် အတိုင်း မသိ ၀မ်း သာမိတယ်။
ပုံတော် ကို ကိုး ကွယ် တာ မဟုတ်ပဲ ဂုဏ်တော် ကို ကိုး ကွယ် တာဖြစ်လို့ ဘယ် ဘုရား က ဖြင့်  တန်ခိုး ကြီး လို့ သွား ဖူး ကြမယ်၊ ဘယ် ရုပ်ပွားတော် က ဖြင့် ဆုတောင်း ပြည့် လို့ အလှည့် ကျ ပင့် ဖို့ စောင့် လိုက် ရ တာ နှစ် ပေါက် တယ် ဆိုပြီး အပြေး အလွှား ဖူး ကြ တဲ့ အထဲ ကျ မ မပါ ပါဘူး။ ဘာဖြစ် လို့ လဲ ဆိုတော့ ကျမ အတွက် တန်ခိုး အကြီး ဆုံး မြတ် စွာ ဘုရား ရှင် က နှလုံးသား ထဲ မှာ ရှိပြီး သား မို့ လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ တို့ ဘုရား ရှင် ကို စော်ကား တဲ့ ဘာသာခြားတွေ ရဲ့ကွန်မန့် တွေ၊ စာတွေ ဖတ်ရတဲ့ အခါ ရင် ထဲမှာ နာကျင် ရသလို ကိုယ့် ဘာသာ ၀င်တွေ ရဲ့ သူများ ဘုရား ကို စော်ကား တဲ့ စာတွေ ဖတ်ရ ရင်လဲ စိတ်ထဲ မကောင်း လှ ပါဘူး။ ကိုယ်ချင်း စာလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ထဲ က ယုံ ကြည် မှု ကို ကာယကံ ရှင်ရဲ့ ဆန္ဒ မပါပဲ ပြောင်း လဲ ပစ်ချင် လို့ မရ သလို၊ ယုံ ကြည်မှု မတူ တာနဲ့ ပဲ ရန်သူ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ ဘာသာ ကတော့ ဘာသာ မတူ ရင် ရန် သူ လို့ သတ် မှတ် ထား လို့ ကိုယ် ကလည်း အဲ လို ပဲ သတ်မှတ် မယ် ဆို တဲ့ ဆင်ခြေ ပေးချင်သူများ ကို တော့ သူတို့ ဘာသာ အတိုင်း ကိုယ်က လိုက်နာ မှာ လား၊ ကိုယ့် ဘုရား ရှင်ရဲ့ အဆုံး အမ အတိုင်း လိုက်နာ မှာလား လို့ မေးချင်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရား ရှင်က သာသနာတည်တန့် အောင်ဆောင်ရွက် ခြင်း ကို ချီး မွမ်း တော် မူခဲ့ ပေမယ့် တုတ်ထမ်း၊ ဒါးထမ်း ပြီး စောင့် ရှောက် ဖို့ တော့ မိန့် ကြား ခဲ့ မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာခြားတွေ က ဘယ် လို ပဲ လွှမ်း မိုး သိမ်း ပိုက် နေပါစေ ၊ ကိုယ့် ရင်ထဲက သရဏဂုံ ပျက်မှ ဘာသာ ပျက်တာပါ။ ကိုယ့် သား သမီးတွေ လက် ထက် ကျ ရင် ဘာသာခြား နိုင်ငံ ဖြစ်တော့ မှာ ပဲ လို့ တွေး ပူနေသူ များ ဟာ လည်း ကိုယ်ရဲ့ ဘာသာရေး အခြေခံ ကို မယုံ ကြည် လို့ ပဲ ဖြစ် ပါလိမ့် မည်။ ကိုယ့် ဘာသာ တရား ကို ကိုယ့် သားသမီးတွေ ရင်ထဲ အထိ ရောက်အောင် သိမ်း သွင်း ပေး နိုင် ရင် သူတို့ ကလည်း သူတို့ သား သမီးတွေ အထိ လက်ဆင့် ကမ်း ထိန်း သိမ်း သွား ပါလိမ့် မယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ပြီးရင် ပျက်ရ မယ့် တရား ကို ဘုရား ရှင် တောင် လွန်ဆန် တော် မမူ ခဲ့ တဲ့ အတွက် အချိန် တန်ရင် တော့ပျက် ပါလိမ့် မယ်။ အဲ ဒီ အတွက် ကြို တေွးပြီး သောက၊ ဒေါသ တွေ ပွားနေမယ် ဆိုရင် လက်ရှိ သာသနာ နဲ့ ဆုံတုန်း ကြုံ တွေ့ ရ တဲ့ အခွင့် အရေး တွေ ၊ ငြိမ်းအေး မှု တွေ ၊ သံသရာ က လွတ်မြောက် အောင် ကြိုး စား ခွင့် စတာ တွေ ကို လက် လွတ် သွား ပါလိမ့် မယ်။
မြတ်စွာ ဘုရား ရှင် နဲ့ တရား တော် တွေ၊ အဲဒီ တရားတော် တွေ ကို လက် ဆင့် ကမ်းစောင့် ရှောက် လာတဲ့ သံဃာတော် တွေ ကို အကြွင်း မဲ့ ယုံကြည် ကိုး ကွယ် ပေမယ့် မျက် မှောက် ကာလ သံဃာ တော်တွေ ကို တော့ ခြွင်း ချက်နဲ့ပဲ ယုံကြည် ကိုး ကွယ် ပါတယ်။ ဒါလည်း မြတ်စွာ ဘုရား ကိုယ် တော် တိုင် ဟောကြား ခဲ့ တဲ့ ကာလာမ သုတ် တော် အတိုင်း ပါပဲ။ ဆရာတော်အချို့ ရဲ့ ပရိယတ်၊ ပတ္ထိပတ်၊ ပရဟိတ ဆောင်ရွက် ချက်တွေ ကို သဘောကျ ကြည် ညို မိသလို ၊ တချို့ ဆရာတော် တွေ ရဲ့ တရားတော် တွေ နာရ ၊ စာပေ တွေ ဖတ်ရ တဲ့ အခါ ကြည် ညို လွန်း လို့ အကြိမ် ကြိမ် ဦး ခိုက် မိပြီး စံ အဖြစ်လည်း သတ် မှတ် မိပါတယ်။ တပါး ချင်း ဥပမာ ပေး ရရင် ကျန် သွား မှာ စိုး လို့ ရေး မပြ တော့ ပါဘူး။ ဒီနေရာ မှာ ကိုယ်စိတ် နဲ့ မတိုက် ဆိုင် တဲ့ သံဃာတော် ကိုတော့ ကိုယ် မကြည် ညို ရင် တောင် ၀တ်ထား တဲ့ သင်္ကန်း ကို လေး စား တဲ့ အတွက် ကိုယ် ၊ နှု တ်တို့ နဲ့ မပြစ် မှား မိအောင် နေပါတယ်။ စိတ် ထဲဘ၀င် မကျ တဲ့ အတွေး ကတော့ ပေါ် တတ် ပါတယ်။
အမျိုး စောင့် ဥပဒေ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆက် ဆွေး နွေး ပါမယ်။ တကယ် ကို လို အပ် နေပြီလား ။ ဟိုဘက် မှာ မန့် ခဲ့ သလိုပါပဲ တကယ် လိုအပ် နေပြီ ဆိုရင် မျက်စိ စုံ မှိတ် ပြီး မကန့် ကွက်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဘုန်းကြီးတွေ နဲ့ ချည်း ပဲ တဖက်သက် အမြင် တစ်ခု ထဲ နဲ့ မပြည့် စုံ နိုင်ပါဘူ။ ဥပဒေပြု ပညာရှင်တွေ ၊ လူမှု ရေး ပညာ ရှင်တွေစတဲ့ ရှု ထောင့် မျိုး စုံ က ပါဝင် လို့ နိုင် ငံသား အား လုံး ရဲ့ အခွင့် အရေး တွေ ၊ စည်း လုံး ညီ ညွတ် မှု တွေ ကို မထိ ခိုက် စေ ပဲ ၊ ဟာကွက် ၊ ပျော့ ကွက် မရှိအောင် ရေး ဆွဲရ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓ ဘာသာ အမျိုး သမီးတွေ ကို ကာကွယ် ချင် လို့ ဥပဒေ မဖြစ်မနေ ထုတ် ဖို့ လို တယ် ဆိုရင် ဒီ့ ထက် အရေး တကြီး ကာကွယ် ဖို့ လို နေ တာ တွေ ကို မေ့ နေကြတာလား ။ မမြင်ကြ တာလား။ ပညာရေး၊ စီး ပွား ရေး နိမ့်ကျ ၊ ချွတ်ခြုံ ကျမှု ၊ ၊ အလုပ် အကိုင် အခွင့် လမ်း နည်း ပါး၊ လောက်ငတဲ့ လုပ်ခ လစာ မရ တာတွေ ကြောင့် ကိုယ် ခန္ဓာ နဲ့ ရင်း ပြီး စီး ပွား ရှာနေရ တဲ့ မိန်း ကလေး တွေ၊ နိုင်ငံ ပေါင်း စုံ မှာ အောက်ခြေ အလုပ် မျိုးစုံ လုပ်နေ ကြတဲ့ မိန်း ကလေး တွေ ၊ (အဲဒီ မိန်း ကလေး အချို့ က အပို ၀င်ငွေ ရ ဖို့ အတွက် လူမျိုး ပေါင်းစုံဆီ က စပွန်ဆာ ယူနေကြတာ ပြည်တွင်း က လူတွေ က အကြား ပဲ ရှိ ပေမယ့် ကျမ တို့ က မျက်မြင်ပါ)၊ မသိနား မလည် လို့ဖြစ်စေ၊ တမင် ဖြစ်စေ၊ လူကုန်ကူး ခံရ လို့ ဖြစ်စေ၊ မလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ် တွေ လုပ်ရ ၊ မယူ ချင် တဲ့ လူ ကို ယူ ရ တဲ့ မိန်းကလေးတွေ ။ အဲဒီ မိန်း ကလေး တွေ ကိုရော မကာကွယ် ၊ မကယ်တင်ချင် ကြဘူးလား။ ကိုယ့် ဆန္ဒ မပါပဲ လုပ်နေ ရတဲ့ မိန်း မပျက် လေး တစ် ယောက် ဟာ တင့်တောင့်တင့်တယ် ယူမယ့် လူ ရှိရင် ဘယ် ဘာသာ ၀င် ကို မဆို လက်ထပ် ပါလိမ့် မယ်။ ဆို တော့ မြန်မာပြည်မှာ ဘာသာခြား နဲ့ ယူ သွားတဲ့ မိန်း ကလေး ( ဒီနေရာမှာ နှလုံး သား အလို လိုက် တဲ့ သူနဲ့ ချို့တဲ့ တဲ့ ဘ၀ အတွက် ထွက်ပေါက် ရှာတဲ့ သူ ကို ထပ်ခွဲ ရ ပါမယ်) အရေ တွက် နဲ့ ကျမ ပြောခဲ့ တဲ့ မိန်း ကလေး တွေ အရေ တွက် ဘယ်ဟာ ပိုများ မယ် ထင်ပါ သလဲ။
ဒီတော့ ကျမတို့ တိုင်း ပြည် အတွက် ဘယ် ဟာက အရင် လုပ် သင့် ပါသလဲ။ တိုင်း ပြည် က ကောင်းသော ပြောင်း လဲ ခြင်း ရဲ့ လမ်း စ ပေါ် ကို ရောက် လာတဲ့ အခြေ အနေ ကို မလို လား တဲ့ သူ တွေ ရှိပါတယ်။ ကျမ တို့ ဆွေမျိုး ထဲ မှာ တင် အစိုး ရ အလုပ် နဲ့ ဂွင်တည့် ပြီး ချမ်း သာ နေတဲ့ သူတွေ ရှိပါတယ်။ အနည်း ငယ် ပွင့် လင်း လာတဲ့ ခုချိန် မှာ ပြည်သူ မျက်စိ စပါး မွှေး စူး ပြီး အကြပ် ခံ ရ တဲ့ ဌာန ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် လက်ရှိ ဖြစ်ကာစ အပြောင်း အလဲ ကို သူတို့ လက် မခံ ချင်ပါဘူး။ အရိုး အရင်း ကိုက် ရတဲ့ သူတောင် ဒီလောက် ဖြစ် နေရင် အဆီ အသား ၀ါး မျို ရ တဲ့ သူ က ပို ပြီး လက် မခံ ချင် ပဲ ရှိပါလိမ့် မယ်။ ဒီတော့ မတော် တဆ ဖြစ် တဲ့ အဖြစ် အပျက် တချို့ ကို အခြေ ခံလို့ ကိုလိုနီ ခေတ် ထဲက သုံး ခဲ့ တဲ့ ၊ အောင်မြင်ခဲ့ တဲ့ အရိုး ရှင်း ဆုံး ၊ အလွယ် ကူ ဆုံး ( ဒီ အင် တာနက်ခေတ် မှာ ပိုတောင် လွယ်သေး ) ဘာသာရေး၊ လူမျိုး ရေး ၀ါဒ မှိုင်း တိုက် နည်း ကို သုံး နေတယ် လို့ ကျမ ယူဆပါတယ်။ သူများ ဘာသာနဲ့ ကိုယ့် ဘာသာ တင် မက ၊ ကိုယ့် ဘာသာ ထဲ မှာတင် ထပ် ကွဲကုန် ကြ ပါတယ်။ ဒီတော့ တိုင်း ပြည် အတွက် တကယ် လို အပ် တာ ဘာလဲ လို့ ခွဲ ခြား မသိ ၊ သတိ မမူ မိ နိုင် လောက် အောင် တွေး အမြင် တွေ လွဲ ကုန် ကြ ပါ တယ် ။ စနစ်တကျ ပုံသွင်း နှိမ့် ချ ခံ ထား တဲ့ ပညာ ရေး စနစ် အောက်မှာ ကြီး ပျင်း လာ ရ တဲ့ လူ တွေ ဖြစ် လို့ လည်း စီမံ တဲ့ သူတွေ သိပ်တောင် ခက်ခက် ခဲခဲ အား မထုတ် လိုက် ရဘူး လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါက ကျမ တွေး မိ သလောက်ပါ။ နိုင် ငံရေး က ရှုပ်ထွေး တဲ့ အတွက် ကိုယ် လိုက် မမှီ တဲ့ လှည့် ကွတ် တွေ လည်း ရှိ နိုင် အုန်း မှာပါ။
ကျမ ရဲ့ သဘောထား ကို ပြောရရင် ဒီမိုကရေစီတွေ၊ လူ့ အခွင့် အရေး တွေ အများ ကြီး မလို ချင် ပါဘူး။ အုပ် ချုပ် တဲ့ သူဟာ ၊ ကိုယ် ကျိုး ချည်း ပဲ မကြည့် ပဲ ။ ကျမ တို့ ပြည်သူတွေ အတွက် ထိုက် သင့် တဲ့ ၀င်ငွေရ စေမယ့် အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်းတွေ ၊ သန့် ရှင်း သပ် ရပ် အဆင့် မီ တဲ့ လူမှု ဘ၀ ပတ်ဝန်း ကျင် ၊ အဆင့် မြင့် တဲ့ ပညာရေး၊ ပြည့် ၀တဲ့ ကျန်း မာရေး စောင့် ရှောက်မှု၊ တပြေးညီ တိတိ ကျကျ စိုးမိုး တဲ့ တရား ဥပဒေ ရဲ့ အကာအကွယ်၊ လာဘ်ပေး ရန်မလို ဆိုတဲ့ စာကပ် ထား စရာ ကို မလို တဲ့ ပြည်သူ့ ၀န်ထမ်း တွေ ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှု ( ဒီနေရာမှာ ၀န်ထမ်း လည်း ပြည်သူ ပဲ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သူတို့ အတွက်လည်း ထိုက် တန်တဲ့ လစာပေး ရ မှာ ဖြစ် သလို ပေါ့ လျော့ ဖေါက် ဖျက်ရင် လည်း ထိထိရောက်ရောက် အရေး ယူမှု ရှိရမယ်) အဲ လို တွေ ဖြည့် ဆည်း ပေး နိုင် မယ် ဆို အလွန် ကျေနပ် မိမှာပါ။ ဒီလို အခြေအနေ ရောက် လာ ရင် တိုင်း ပြည် ရဲ့ ဂုဏ် သိက္ခာ တတ် လာ မှာ ဖြစ် သလို ၊ ပြည်သူ အများစု ကိုး ကွယ် တဲ့ ကျမ တို့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ လည်း ပိုပြီး ဂုဏ် ရှိန် တတ် လာ မှာပေါ့ ။ အဲ ဒီ အချိန် ကြရင် ကိုယ့် ရဲ့ ဘာသာ ကို တိုးတတ် ပြန့် ပွား အောင်လည်း ပိုပြီး ဆောင် ရွက် လာ နိုင် မှာပါ ။
ကျမ တစ်ဦး ထဲ ရဲ့ အမြင် အရ သံဃာတွေ ကို ကြည် ညိုလေးစားတဲ့ အထဲ မှာ ကိုယ် သိပ် နား မလည် တဲ့ သိက္ခာ ပုဒ်တွေ ၊ ၀ိနည်း တွေ ကို အသာ ထား လို့ ယောက်ျား တိုင်း မကင်း နိုင် တဲ့ ( အခြောက် များ မပါ) ဆန့် ကျင် လက် လိင် မိန်း မ တွေကို စိတ် မညွတ် အောင် ထိန်း နိုင်တာ ကို အလေး စား ဆုံး ပါပဲ။ ရဟန်း ၀တ်နဲ့ မပျော် မွေ့ တော့ လို့ ၊ သိက္ခာ ပုဒ်တွေ ကို ဆက်လက် မထိန်း သိမ်း နိုင် မှာ စိုး လို့ လူ ၀တ် လဲပြီး အချိန်တန် အိမ်ထောင် ရက် သား ကျတာ တာမျိုး ကိုအပြစ် မတင် တဲ့အပြင် သူ့ ရဲ့ ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာ ပေါ် မူတည်ပြီး ဆက်လက် လေး စား နေ မှာ ပါ။ ဒါပေမယ့် မာတု ဂါ မနဲ့ တွေ့ တော့ မှ မထိန်း နိုင် ပဲ လူထွက် ။ ဒီ အထိလည်း မပြော လိုသေး ပေမယ့် ရဟန်း အဖြစ်နဲ့ လှူ ဒါန်း ထား တာတွေ ကို အိမ်ထောင်အတွက် ယူ သွား တာ ကို ဥ ပဒေ အရ အပြစ်ပေး သင့် ကြောင်း ထောက်ပြ တာ ဟာ သူ့ အပြစ် ကို ကိုယ့် အပြစ် လုပ် ယူ တာ မဟုတ် ပါဘူး။ ကိုယ့် သဘော နဲ့ ကိုယ် အိမ် ထောင်မှု ထဲ ခုန်ဆင်း လာပြီး မှတော့ သိက္ခာ မချ ရသေး လို့ သံဃာ အဖြစ် နဲ့ ပဲ ရှိ နေ သေး တယ် လို့ တော့ မပြောပါနဲ့ ။ သင်္ကန်း ဆွဲ ချွတ် ပြီး အတင်း အဓမ္မ ထောင်သွင်း အကျဉ်း ချ ခံ ရတဲ့ သံဃာတွေ နဲ့ ဘယ် လို မှ နှိုင်း လို့ တောင် မရ ပါဘူး။
ဒီတော့ ကျမရဲ့ အရင် ပိုစ့် မှာ ဘယ် ဘုန်း ကြီး ကို မှ ဆဲ တာ မပါ ခဲ့ သလို သံဃာ မဟုတ်တော့ တဲ့ သူ ကို ဝေဖန်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သံဃာ အချင်းချင်း ရန်တိုက် ပေး ပြီး သင်းခွဲ ခြင်း လို့ ကို ဇွဲ မာန် ဆို ခဲ့ တာ ကို ပြန် ရုပ်သိမ်း စေ ချင် ပါတယ်။
နင် ဒီစာကို ငါ့ကိုလည်း လာပြန်ပီပီး… နှစ်ခါပြန်သုံးတယ်… ဂီမ….
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတွေ ဘာသာခြားနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုတာကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အမျိုးစောင့်ဥပဒေဆိုတာဟာ ကုလသမဂ္ဂ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းအပိုဒ် (၁၆) မှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတိုင်း လွတ်လပ်စွာ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တွေက မနေ့ကရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဒီကြေညာချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့Rainfall အမည်ရှိတဲ့ ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်း တည်ထောင်သူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူဟောင်း ဒေါ်ဇင်မာအောင်က အခုလိုပြောပါတယ်။
“ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်၊ ဘာသာခြားနဲ့ လက်ထပ်ခွင့်ကို ထိန်းချုပ်မယ့်ဟာမျိုး၊ လက်ထပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ခွင့်ပြုချက်တွေ အဆင့်ဆင့်ယူပြီးတော့ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့လေ အဲဒီဥပေဒတင်သွင်းဖို့ ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားနေတယ်၊ အထက်ဗမာပြည်အတွက်ကို ဆရာတော် ဦးဝီရသူကနေပြီးတော့ တာဝန်ယူပြီးတော့ ဒီဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းဖို့ လုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့၊ အဲဒီဥပဒေကြမ်းကို အမျိုးစောင့်ဥဒေမူကြမ်းလို့ ခေါ်ဆိုထားတယ်ပေါ့နော် အဲဒါကိုကြားလိုက်လို့၊ အဲဒါကို ကျမတို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့နေပြီးတော့ လူ့အခွင့်အရေးရှုထောင့်ကနေကြည့်ကြည့် လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ မြင်တယ်လေ”
ဒီသဘောထား ကြေညာချက်ကို ဒေါ်ဇင်မာအောင်တို့ရဲ့ RAINFALL အဖွဲ့နဲ့အတူ၊ အခရာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ KWEG ကရင်အမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ ဖန်တီးအိမ်အဖွဲ့၊ ၈၈ မျိုးဆက်(အမျိုးသမီးအဖွဲ့)၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ (တ-က-သ)၊ Colorful Girlsနဲ့ Triangle Women Support Group ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေက ပူးတွဲထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။
အဲဒီ အမျိုးစောင့်ဥပဒေ ဆိုတာကို မန္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်တိုက်က ဆရာတော် အရှင်ဝီရသူက ဇွန်လ ၁၃ ရက်နဲ့ ၁၄ ရက်နေ့တွေက ရန်ကုန်တိုင်း မှော်ဘီမြို့နယ် အောက်ဝါးနက်ချောင်းရွာက ဓမ္မဒူတ ဇေတဝန်တောရ အရှင်ဆေကိန္ဒာရာမကျောင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဘာသာရေးအသွင်ဆောင် ပဋိပက္ခတွေ အဆုံးသတ်ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက်ဆိုပြီး ကျင်းပခဲ့တဲ့ သံဃာ့အစည်းအဝေးမှာ တင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ဆရာတော် အရှင်ဝီရသူကို တနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းက လျှောက်ထားမေးမြန်းခဲ့ရာမှာ မိမိအနေနဲ့ အဲဒီလို တင်သွင်းခဲ့ခြင်းလုံးဝမရှိကြောင်းနဲ့ အထက်မြန်မာပြည်အတွက် ပြည်သူတွေထံက လက်မှတ်ကောက်ယူရေးကို တာဝန်ယူခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ကြောာင်း RFA ကို မိန့်ကြားပါတယ်။ အရှင်ဝီရသူနဲ့ ဦးခင်မောင်စိုး ဆက်သွယ်လျှောက်ထားချက် အပြည့်အစုံကိုနားဆင်ပါ။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူဟောင်းလဲဖြစ်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ချီးမြှင့်တဲ့ အမျိုးသမီးသတ္တိရှင်ဆု ရထားသူတစ်ဦးလဲဖြစ်တဲ့ မဇင်မာအောင်နဲ့ RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုနေရိန်ကျော် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကို နားဆင်ပါ။
အောက်ကစာက ရွာထဲကကဘုန်းကျော် မေးလ်ဂရုမှာပို့ထားတဲ့စာပါ..။
စစ်တပ်အင်အားက လေးသိန်း။ သူပုန်အင်းအားက နှစ်သိန်းကျော်။ ပေါင်းတော့ ခြောက်သိန်းကျော်။ ရဲဝန်ထမ်းက ငါးသောင်း။ ထပ်ပေါင်းတော့ ရ-သိန်းနီးပါး။ ဒီအင်အားက စပါးစိုက်တဲ့လယ်သမားမဟုတ်တော့ သူတို့ ကို ပြည်သူက ထမင်းကျွေးရတယ်။
နောက်ထပ်ကျွေးရတဲ့ လူတွေကတော့ သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့သံဃာ။ အရေအတွက်အားဖြင့် လေးသိန်းနီးနီး။ သီလရှင်ပါ ထပ်ပေါင်းတော့ ငါးသိန်း။ ဒီအင်အားကလည်း စစ်သားတွေလို သူများကျွေးမှ စားရတာဆိုတော့ ဆန်ကုန်မြေလေးတွေပဲ။
စစ်သားနဲ့ ရဲ ဖြစ်ဖို့ က သင်တန်းလိုတယ်။ စနစ်တကျလက်ခံပြီးမှ လုပ်လို့ ရတယ်။ ဘုန်းကြီးက ၀င်ချင်သလိုဝင်ထွက်ချင်သလိုထွက်လို့ ရတယ်။ အများဆုံး မိနစ်ငါးဆယ်လောက်ရင်းလိုက်ရင် ဘုန်းကြီးဖြစ်တယ်။ ပြီးရင် အလကားရတာလည်း စားရတယ်။ ကန်တော့လည်းခံရတယ်။ ဘုန်းကြီး ဦးရေနဲ့ စစ်သားဦးရေ ဒီလောက်များတော့တိုင်းပြည်က ၀ါးတီးများများပေးပြီး အရည်မရအဖတ်မရတွေများလာတယ်။ ဆင်းရဲလာတယ်။
လူဦးရေအားဖြင့် သန်းခြောက်ဆယ်ကျော်ရှိတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဘုန်းကြီးအရေအတွက်နဲ့ စစ်သားအရည်အတွက်က မြန်မာလောက်မများဘူး။ သိရိလင်္ကာနိုင်ငံလည်း အလားတူ။
တိုင်းပြည်ရဲ့ ဝင်ငွေက နောက်ဆုံးဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ စစ်တပ်ဆီကိုရောက်သွားတယ်။ နောက်ပြီး ဘုရားတည်တယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလှူတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှ မဆင်းရဲရင် ဘယ်နိုင်ငံက ဆင်းရဲမှာလဲ။ သဲထဲရေသွန်တာကမှ အရာထင်အုံးမယ်။ ပုဂံက ဘုရားနဲ့ တင်လုံလောက်တာကို လျှောက်ပြီးတည်ချင်တဲ့လူကရှိသေးတယ်။
တိုင်းပြည်ရဲ့ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြင့်ဖို့ အတွက်စစ်သားနဲ့ ဘုန်းကြီးဦးရေကို ကန့် သတ်ဖို့ လိုတယ်။ ဒါတွေက အရေအတွက်များပြီး ပြည်သူဝန်ပိတယ်။ ဒါနဲ့ တဆက်တည်း အလုပ်မဲ့လာတယ်။ အလုပ်မဲ့လာတော့ အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာတဲ့လူတွေပေါလာတယ်။ သောက်ပြသနာရှာလာတယ်။ ဦးဝိရသူတို့ လိုအုပ်စုကတော့ အလုပ်မရှိလို့ဒီလိုဖြစ်လာပဲ။ အားနေတော့ သောက်ပြသနာရှာတာပေါ့။ လူထွက်ပြီး စပါးစိုက်ဖို့ ၊ အလုပ်လုပ်ဖို့ လည်း လက်ကြောမတင်းတော့ သင်္ကန်းနဲ့ ယူနီဖောင်းကို ခုတုန်းလုပ် ပြည်သူ့ လူထုကို ဆရာလုပ်၊ ဒီလိုလူတစ်စုကြောင့် တိုင်းပြည်မတိုးတက်တာလို့ ပြောရင်မလွန်ပါဘူး။
ရွှေည၀ါဆရာတော်အသံကို နားထောင်ကြည့်ပါ။ သူ့ ပဲကြောက်ရတော့မဲ့အသံနဲ့ ။ ဟောက်စား။–
မမိုချိုရဲ့ ပို့စ်က အရမ်း နက်နဲလို့ ပေါ့ပေါ့လေး ကွန်မန့် မပေးရဲပါဘူး ရှင်..
ဒါပေသိ ဒီစာကြောင်းလေးကိုတော့ အရမ်းကျေနပ်မိတယ်..
” ကျမ အတွက် တန်ခိုး အကြီး ဆုံး မြတ် စွာ ဘုရား ရှင် က နှလုံးသား ထဲ မှာ ရှိပြီး သား မို့ လို့ ဖြစ်ပါတယ်။”
ဒါ့ကြောင့်မို့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် သူတိုင်းရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ဘုရားတည်နိုင်ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..
အောက်ကစာက မေးလ်ဂရုမှာပို့ထားတဲ့စာပါ..။ စာရေးသူ Nyein Chan ဖြစ်ပြီး.. သူ့ကိုခရက်ဒစ်ပေးပါတယ်..။ မေးလ်ဂရုထဲ လူတိုင်းသိအောင်ပို့ထားတဲ့စာမို့.. ဒီမှာကူးဖေါ်ပြတာ သဘောတူမယ်လို့ထင်ပါတယ်…။
Nyein Chan nyeinchan2008@..com
ယခုတလော အမျိုးသာသနာကို ချစ်ခင်ပါစောင့်ထိမ်းပါဆိုပြီး အမျိုးသမီးတွေကို သူတို့ဆန္ဒအားအလေးမထားပဲ ဘာသာတူသာယူခွင့်ဖြင့်ချုပ်ထိမ်းရန်ကြိုးစားလာ မှုကို တွေ့ရသည်။ ဒီမိုကရေစီအော်ပြီးဘာမှ ဒီမိုကရေစီအားနားလည်မှုမရှိသော ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတချို့လဲ တို့လူလေးများဆိုသလေးဆိုရာတွင် ဝေလေလေ ဝင်လုပ်ကြသည်။ ဒီမိုကရေစီ၏အနှစ်သာရအရ သူတပါး၏၊ လူ၏အခွင့်အရေးများ ကိုချုပ်ထိမ်းရန်ကြိုးစားခြင်းကို ခွင့်ပြုသင့်ပါသတဲ့လား။ အဲ့ဒါဆိုလျှင် ဘာကိစ္စများ ကျွန်တော်တို့အားလုံးစစ်အစိုးရ၏ဖိနှိပ်မှုအောက်ကလွတ်မြောက်ရန်လွပ်လပ်ခွင့် ရရန်ကြိုးစားဘို့လိုခဲ့ပါသနည်း။ ဦးနှောက်ကိုသုံး၍စဉ်းစားသင့်သည်များအများကြီး ရှိပါသည်။
ဦးဝီရသူက ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုမှိုင်းတိုက်လျှက်ရှိသည်။ သာသနာကို ကာကွယ်ဘို့အတွက်ဟုဆိုလျှင် ဗုဒ္ဒဟောကြားတော်မူခဲ့သော မေတ္တာတရားများ ကိုတော်လှန်မျက်ကွယ်ပြု၊ သူတပါးအားရန်လိုဒေါသအမျက်ထားခြင်းမရှိစေရန်ညွှန် ကြားမှုများကို ချိုးဖေါက်ကာ ဗုဒ္ဒဘုရားရှင်၏တရားတော်များကို တော်လှန်ပုန်ကန် ပြီး ဝီရသူတရားတော်တည် ထောင်ရန်ကြိုးစားခြင်းပေပဲလား စဉ်းစားရန်လိုပါသည်။ ဗုဒ္ဒဘာသာ၏အနှစ်သာရကို ချိုးဖေါက်ကာ၊ အစဉ်အဆက်တလျှောက်လုံးအေးချမ်း သောဘာသာအဖြစ်အများအသိအမှတ်ပြု ခံခဲ့ရမှုများကို အခြားဘာသာများကို ရန်လိုတိုက်ခိုက်တတ်သော၊ အပြောနှင့်အလုပ်နှင့်မညီသောဘာသာအဖြစ်မြင်သွားကြစေရန်
ထိုလူများကထိထိရောက်ရောက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဒဘုရားရှင် ဟောကြားတော်မူသောတရားနှင့် ကိုယ့်ရှင်တို့ လုပ်ရပ် ဘာများကိုက်ညီသနည်းကို ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်သင့်သည်။ သတ္တိရှိ လျှင် ပြောပါသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရဲသောသတ္တိမရှိသူများ မဟုတ်လျှင်တော့ ထိုသူများသည် ဘာသာတရားကို ကာကွယ်ရန်အကြောင်းပြ ပြီး ယခုတောင် ဗုဒ္ဒဘာသာကို ကမ္ဘာ့အလယ်တွင်ရန်လိုမုန်းတီးမှုအရှေ့ထားသော ဘာ သာတရားအဖြစ် အမည်ပျက်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေကြခြင်းသာလျှင် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဗုဒ္ဒဘာသာအား ကိုယ့်ရှင် တို့လုပ်ရပ်ကြောင့်မည်မျှ သိက္ခာကျဆင်း၊ အထင်သေးခံစေခြင်းဖြင့် သာသနာကို မည်သို့ ထိမ်းသိမ်းကြမည်နည်း။ လူသားဦးနှောက်ဖြင့် စဉ်းစားတတ်ရန်လိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဒဘာသာကို လူအများစုကကျင့်သုံးယုံကြည်ကြသည်ဆိုပေမဲ့ လူအများအားနှင့် အနဲကို ဖိနှိမ်တိုက်ခိုက်ခြင်းသည် ဗုဒ္ဒတရားတော်ကိုကော၊ ဒီမို ကရေစီကိုပါ စော်ကားဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာသာတရားကို ထိမ်းသိမ်းကြရန် ဥပဒေထုတ်မည်ဘာညာဆိုပါက ထိုသို့လုပ်ခြင်းက အခြားဘာသာများအတွက် မည်သို့သော တူညီမှုပြဌာန်းနိုင်ပါမည်နည်း။ ဥပမာ ဗုဒ္ဒဘာသာက ထိုဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခွင့်ပြုရမည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာကလဲ ရှာရီးယားဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ပေး စေရန်တောင်းဆိုနိုင်ပေသည်။ ဘာသာပေါင်းစုံစုစည်းနေထိုင်ကြ သောနိုင်ငံတွင် မည်သည့်ဘာသာတရားတခုတည်းကိုမျှ ဦးစားပေး ဘက်လိုက်ခြင်းမလုပ်သင့်ပေ။
ထိုသို့လုပ်ရန်လိုသည်ဟုစဉ်းစားပါက ကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေသော ဒီမိုကရေ စီဆိုသည်မှာ ဘာမျှအဓိပါယ်ရှိသောစကားလုံးဟုတ်မည်မထင်ပါ။
တချို့က ပြောကြသေးသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေလျှင် မြန်မာစကားတော့ တတ်ရ မည်။ တတ်ထားလျှင်တော့ ကောင်းပါသည်။ သို့သော် လမ်းမပေါက်စာသင်ကျောင်းမရှိသော တိုင်းရင်းသားကျေးရွာများတွင် မြန်မာစကား တလုံးမျှမပြောတတ်သော သူများတပြုံကြီးရှိနေသေးသည်ကို ထိုသူများတသက် တွင်တခါမျှ မတွေ့ဘူးကြဟုထင်သည်။ ထိုကလေးများ၊ လူကြီးများသည် ဘာသာ စကားမတတ်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်။ စကားကို လက်လွတ် စပါယ်ပြောရန်မသင့်ကြပေ။ အထူးသဖြင့် ဒီမိုကရေစီပြောနေသော ၈လေးလုံး ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် ပိုပြီးလက်လွတ်စပါယ်မပြောသင့်ပေ။
ဒီမိုကရေစီတွင် မြွေကဲ့သို့ လျှာနှစ်ခွထားသောမူမျိုးလက်ခံသင့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့ လူကြီးအကောင်ကြီးများအတွက်ဥပဒေတမျိုး၊ လူထုအတွက် ဥပဒေတမျိုး လုပ်လေ့ရှိသော စစ်အစိုးရကို မကြိုက်သောကြောင့် ရုန်းကန်လာကြသည်ပဲ မဟုတ်ပါလား။ မိမိတို့ကလဲ့တွင်လဲ ဒီလို လျှာနှစ်ခွ၊ ကျောသားရင်သားခွဲခြားသော ဥပဒေမျိုးကို လက်သင့်ခံသင့်ပါသလော။
အောက်ကစာက မေးလ်ဂရုမှာပို့ထားတဲ့စာပါ..။ စာရေးသူ “လှိုင်မြင့်” ဖြစ်ပြီး.. သူ့ကိုခရက်ဒစ်ပေးပါတယ်..။ မေးလ်ဂရုထဲ လူတိုင်းသိအောင်ပို့ထားတဲ့စာမို့.. ဒီမှာကူးဖေါ်ပြတာ သဘောတူမယ်လို့ထင်ပါတယ်…။
On 6/19/2013 2:57 PM, Billy Mackenzie wrote:
အထက်ပါ အမျိုးစောင့် ဥပဒေဆိုတာ တကယ်ကတော့ ဒီခေတ်မှာ အတည်ဖြစ်မလာနို်င်ပါဘူး ။ ဒါပေမည့် မြန်မာအမျိုးသမီးကို ဧည့်နိုင်ငံသားနဲ့အိမ်ထောင်ပြုကြ ယူကြတယ်ဆိုလျင် သူတို့ ဘက်က ဘာသာရေးဥပဒေနဲ့အသာစီးယူထားတာကိုတော့ တရားမျှတမှုရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာလောက်တော့ အမျိုးဘာညာ ဖယ်ထားဦး ။ လူအခွင့်အရေးရှုဒေါင့်ကနေ အကာအကွယ်ပေးဖို့အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တွေ စဉ်းစားကြရပါမယ် ။ ဒါတာဝန်ပါ ။ ကျမတို့ မသိပါဘူး မပြောပါနဲ့။
တကယ်တော့ မြန်ာမနိုင်ငံမှာ အစ္စလမ်ဘာသာဟာ ရှေးယခင်ကထည်းက မြန်မာမင်းတွေ လက်ထက်မှာ ရှ၇ီယာ ဥပဒေ သုံးခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး ။့အင်္ဂလိပ်အဓ္ဓမကျွန်ပြုတာ ခံရပြီးနောက်အဂ်လိပ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကို စံနစ်တကျအုပ်ချုပ်ဖို့( တကယ်က နိပ်ကွပ်ဖို့) အိန္ဒိယနွယ်ဖွား အစ္စလမ်အပါအဝင် ကုလားတွေ ခေါ်လာခဲ့တာပါ ။
ဒီနေရာမှာ ကုလားလို့ သုံးရတာကလဲ အိန္ဒိယနွယ်ဖွားတွေ အမျိုးစုံနေလို့ခြုံခေါ်လိုက်တာပါ ။ မိဘက မဆုံးမလို့ မဟုတ်ရပါဘူး ။ ။ နောက်ကုလား ( ကူးလာသူ )ဆိုတာ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်တိုင် ( ကူးလာသူများ = MIGRANT ) လို့ တရားဝင်သုံးနေလို့ ပါ ။
အင်္ဂလိပ်ကသခင်ဖြစ်ချိန်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ က ကျွန် ။ ကျွန်ဆိုတော့ လူရာအသွင်းမခံရဘူးပေါ့ ။ ဒီတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလဲ သူတို့လူမျိုးရေးနဲ့တွဲဖက်မြင်ထားတော့ အမြင်က ကပ်နေတယ်လေ ။ နိုင်ငံရေး အမျိုးသားရေး နဲ့မာန်ထောင်လာမယ် မြင်နေတယ်လေ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိပ်ကွပ်ဖို့ပျောက်ပျက်သွားအောင် ကျနော်တို့ ဆီမှာ အစ္စလမ်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုတာရှိခဲ့ရင် ရှရီယာဥပဒေ ကို အသုံးပြုစေခဲ့တယ် ။ အဲဒီဥပဒေကို ထားခဲ့ပေးတယ် ။ အဲဒီလို အင်္ဂလိပ်က တဖက်သတ် လုပ်ထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုက ဗုဒ္ဓဘာသာ ပပျောက်သွးစေဖို့။ သူတို့ က သခင် ။ ကျနော်တို့ကျွန်ဘဝ ရောက်နေတော့ ပြုသမျှနုနေခဲ့ကြရတာပေါ့ ။
နောက်ဆုံး ဘုန်းကြီးတွေကို ဥိးထိပ်ပန်ရတာ သူတို့ မျက်စေ့စပါးမွှေးအစူးဆုံး ။ နောက်ဆုံး သင်္ကြန်ကို ဖျောက်ဖို့ လုပ်ရာကနေ အမျိုးသားရေး ပေါက်ကွဲစေတဲ့အထိ လုပ်မိသွားပါတယ် ။ အချုပ်က ဗုဒ္ဓဘာသာပျောက်ရင် ဒီနိုင်ငံကို ရာသက်ပန်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီ ။ အဲဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့မလွှဲသာလို့ လွတ်လပ်ရေးပေးပေမဲ့ သာသာလေး သပ်လျှိုထားခဲ့တယ် ။
သူတို့ နိုင်ငံမှာ ကျတော့ ရှရီယာ ဥပဒေ ကိုသုံးခွင့်မပေးခဲ့ဘူး ။ ကျနော်တို့ က ကျွန်ဘဝမှာ မလွှဲသာလို့ငြိမ်ခံရပေမည့် အခု သခင် သခင် ။ သူတို့ နိုင်ငံ ကိုနမူနာယူရမယ်ဆိုတဲ့ အသိရှိသင့်ပါပြီ ။ ကဲ အမျိုးသမီး ဘာဘာညာညာတို့။
ပိုဆိုးတာက အင်္ဂလိပ်လုပ်ခဲ့တာက မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းကို အိမ်ထောင်ပြုရာမှာ ဓလေ့အနေနဲ့အသိအမှတ်ပြုတဲ့အဆင့်လောက် ဘဲပေးထားပြီး ဥပဒေအနေနဲ့လွှမ်းမိုးခွင့်မရှိနေတာပါ ။ အင်္ဂလိပ်ကိုကန်ထုတ်ပြီး သူတို့ ကိုယ်တိုင် သူတို့ နိုင်ငံမှာ မကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ မတရားတဲ့ မမျှတတဲ့ ဥပဒေကို ကျနော်တို့ ဆီမှာ ရာသက်ပန် ထားဖို့အခွင့်ပေးမယ်ဆိုလျှင် ကျနော်တို့ ရထားတဲ့လွတ်လပ်ရေး ဆိုတာက ၁ဝဝ-% မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာ ပြနေတာဘဲ ။
အဆိုးဆုံးက မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မွတ်စလင် အိမ်ထောင်ကျတယ် ။ ကိုယ်ကအိမ်ရှင် ။ လက်ထပ်တော့ မင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့အသိအမှတ်မပြုနိုင်ဘူး လုပ်တာကတော့ ရှက်တတ်လျင် လဲသေဖို့ ဘဲရှိတော့တယ် ။ ဒီမင်္ဂလာ ဒီအိမ်ထောင်ပြုတဲ့ ကိစ္စမှာ အိမ်ရှင်က ထုတ်သုံးစရာ ဥပဒေမရှိ ။ ကိုးကားစရာ ဥပဒေမရှိ ။ ဧည့်သည်တွေက အသိအမှတ်မပြုဘူး ဆိုတဲ့အထိ စော်ကားနေတာ ခံနေရတယ် ။ လင်မယားကွဲတယ် ။ လင်သေလျင် အမွှေမရဘူးတဲ့ ။
အဂ်လန်မှာ ၁၉၈၄ -ခုနစ်ဆီက ဆော်ဒီက ဘီလျံနာသူဌေး ခါရှော်ဂီ ( ဗမာပြည်မှာ ရှော်ဖီ ) အဂ်လိပ်မနဲ့လင်မယားကွားရှင်းကြတော့ ရှာရိယာ ဥပဒေ အသံတောင်မထွက်နိုင်ဘူး ။ ငါတို့ ဆီမှာ အပေါ်စီးပေးထားခဲ့တာ ငါတို့ အဂ်လိပ်ကိုတော်လှန်တာ အကျွင်းအကျန်တွေ ကျန်နေသေးတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ကြပါ ။
အင်္ဂလန်မှာ မယားလေးယောက် ယူခွင့်ရှိသလား ဒေါ်စုကိုမေးထား ။ ယဉ်ကျေးတဲ့ နို်င်ငံတိုင်းမှာ မယားတစ်ယောက်ထက်ပိုယူခွင့်မရှိပါဘူး ။ အဲကျုပ်တို့ ဆီမှာ မယားပြိုင်ဆိုပြီး ယူခွင့်ပေးထားတာ ဦးနေဝင်းလို မိုးပေါ်ထောင်မပြစ်ဘူးဆိုတဲ့ လူရမ်းကားတွေက လုပ်သွားတာ ။ အဲဒီဥပဒေကို ရတနာနဲ့နပ်ဖို့ ထုတ်လိုက်တာမို့ရတနာနတ်မယ် ဥပဒေလို့တွင်နေတယ် ။ လူရမ်းကား ( x ) သရမ်းချင်လို့ ထုတ်ထားတဲ့ ဥပဒေ ။ ပြန်ဖျက်ရမယ် ။
အင်္ဂလန်က အိမ်ထောင်ပြု အိမ်ထောင်ကွဲ ဥပဒေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကောင်းကောင်းသိပါတယ် ။ မဇင်မာအောင်လဲ အမျိုးသမိးခေါင်းဆောင်လုပ်နေတာ သိပါမယ် ။
ကဲ မျက်နာလွှဲနေကြမှာလား ။ နဲနဲ ရီုင်းတာပါလို့စိတ်မရှိဖို့။
အိုက်ဒါလည်း စဉ်းစားစရာပဲ… အမျိုးသမီး လူ့ အခွင့်အရေး တောင်းဆိုမယ့်ဆို… အဲ့ မယားတယောက်ပဲရှိရမယ့် ဥပဒေ ကို လည်း ထောက်ခံသင့်တယ်… ပြင်းပြင်းထန်ထန် တင်းကျပ်ရမယ်…. ကလေး ဆိုလည်း တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအနေနဲ့တအိမ်ထောင် လေးယောက်ထက်မပိုသင့်… အမျိုးသမီးထုက မိန်းမလေးယောက်ယူတာ ကျေနပ်သပဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လည်း ဘာမှပြောစရာ ကန့် ကွက်စရာမရှိ… ကျွန်တော်က ယောကျာင်္းလေးပဲ ဘာကန့် ကွက်စရာရှိလည်း နော်…. သူတို့ တောင် ကျေနပ်သေးတာပဲ…. ငဲငဲငဲ….
ဒီ ပိုစ့် ကို သဘော တူ လို့ ဖြစ်စေ ကွဲလွဲ လို့ ဖြစ်စေ ရှယ် ချင် ရင် ဒီ site ကို credit ပေး လို့ လွတ်လပ် စွာ ရှယ် နိုင် ပါတယ်။
တစ်ဦး ချင်း ရဲ့ ကွန့် မန့် တွေ ကို နောက်မှ ပြန် ဆွေး နွေး ပါမယ်။ ထုံး စံ အတိုင်း အိမ် မှု ကိစ္စ လေးတွေ ရှိသေး လို့ ခွင့် ပြု ကြ ပါအုံး။
ဘာမှ ပြန်ပြောစရာ မရှိလောက်အောင် ပြည့်စုံပါတယ်…..
အနှစ်ချုပ်အားဖြင့်… ကျွန်တော်မြင်တာကတော့…. မြန်မာနိုင်ငံဟာ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး အားနည်းနေလို့ကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်….. လုပ်ရမှာတွေတော့ အများကြီးပေါ့ဗျာ….. ဘာလုပ်ရမလဲလို့ တော့ မပြောတော့ပါဖူး… ကိုယ့်ထက်သိတဲ့သူ ရွာမှာ တပုံကြီးပါ…..
အမှန်တော့ ကျွန်တော် အောက်မှာ ဆက်ရေးမလိုပါပဲ… ဒါပေမယ့် စိတ်ကုန်ပီး ဆက်မရေးတော့ဖူး… အမလည်း အားနာလို့ ….
ကျွန်တော် ရန်ကုန်မှာနေတုန်းက ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းက ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ကျောင်းရောက်သွားတော့ အဲဒီမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ လူမျိုးခြားတွေလည်း တရားလာထိုင်ကျင့်ကြတာတွေ့တယ်၊ အဲဒါနဲ့ သူတို့ တရားထိုင်ပြီး နားချိန်မှာ သိချင်တာလေးတွေမေးကြည့်မိတယ်၊ သူတို့ဖြေတဲ့ထဲမှာ တူတာဘာတွေ့ သလဲဆိုရင်“ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားထိုင်တဲ့ ကျင့်စဉ်ဟာ တကယ်လက်တွေဆန်ပြီး လက်ခံနိုင်တယ် သဘောကျတယ်´´ တဲ့။ ဆိုလိုချင်တာက တကယ်ကျင့်ကြံလာအောင် ဗုဒ္ဓတရားတော်ရဲ့ အနှစ်သာရကို လက်ခံလာအောင် သာ ဟောပြောကြည့်ပါ လက်ခံလာတဲ့ ဘယ်သူမဆို ယုံယုံကြည်ကြည်ဖြစ်လာမယ် အဲလို ယုံယုံကြည်ကြည် လုပ်လာကြတဲ့ လက်ခံလာကြတဲ့သူ များလေလေ ဘာသာသာသနာ ပွားလေလေဘဲလေ။ ဘာသာယုံကြည်မှု ဆိုတာ ချိန်းခြောက်ကိုးကွယ်ခိုင်းလို့ ရတဲ့အရာမဟုတ်သလို ဥပဒေကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ လုပ်ယူကိုးကွယ် စေလို့ရခဲ့ရင်လည်း အဲဒီသူအတွက် အပေါ်ယံ ကိုးကွယ်မှု ဘဲဖြစ်နေမှာမို့ ခိုင်မြဲတဲ့ဘာသာအင်အား သာသနာပျံပွားခြင်း မဟုတ်လောက်ဘူလို့ ယူဆမိပါတယ်။ အဆန်အကာညီမျှစွာရှိတဲ့ သစ်သီး နဲ့ အဆန်ချောင်နေတဲ့သစ်သီး တန်ဖိုးထားတာခြင်း တူတယ်လို့ ယူဆကြရင် မှားမယ်လို့ထင်…..။
အခု စင်ကာပူ အခြေ အနေ တော်တော် ဆိုးနေပါတယ်။အဲကွန်း ဖွင့် ပြီး အိမ်ထဲ မှာ အလုံ ပိတ် နေရ ပါတယ်။ ကျမ က ဒီ အတိုင်းတောင် အလုံ ခန်း ထဲ နေရ တာတို့ ၊ လေ မသန့် တာတို့ ဆိုရင် အသက် ရှူ ကြပ်တတ်တယ်။
အိပ်ပျော် နေရင်း မီးခိုး တွေ မတရား မွန်း လာ အောက်ဆီ ဂျင် ပြတ် ပြီး သေသွား ရင် ဘာ မှတောင် သိလိုက် ရမှာ မဟုတ်ပါဘူ။ ဒါကြောင့် အင်တာနတ် သုံး ခြင်း ၊ ဖေ့ ဘွက် ဖတြ် ခင်း ကို ခု က စ ရပ် ပါပြီ။
ခုနေ သေသွား ရင် ဒေါသနဲ့ သေခြင်း ဖြစ်တဲ့ အတွက် ငရဲဘုံ တန်းရောက် သွား ပါလိမ့် မယ်။ ဒါကြောင့် ခုချိန် က စလို့ မအိပ် ခင် ထိ တရား ခွေ များ ဖွင့် လို့ တရား နာ ပါတော့ မယ်။
နက်ဖြန် တနေကုန် လို့ မှ ကောမန့် မတွေ့ရင် သဘော ပေါက် လိုက် ကြပါ။
အားလုံး ကောင်းသွားဖို့ ကို ဆုတောင်းပါတယ်။
ဖြစ်လာတာ တွေ ကို ရဲရဲ ရင်ဆိုင် နေနိုင်တဲ့ မိုချို့ ရဲ့ စိတ်မှာ တရားအမှန် အောင်းနေတာ မြင်ရပါတယ်။
အားလုံး ကောင်း သွားမှာပါ။
ဆရာမ ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်က မျိုးစောင့်ဥပဒေရေးဆွဲမျှုမှာ ရဟန်းဝိနည်းနဲ့ မညီကြောင်း ပြောကြားခဲ့တဲ့ အတွက်..။
ဗုဒ္ဒချမှတ်တော်မူခဲ့တဲ့ ရဟန်းများရဲ့ ၀ိနည်း ၂၂၇ သွယ် ကို လေ့လာနိုင်အောင် တင်ပေးပါ့မယ်..။
အကျယ်ကတော့ ၀ိနည်းပိဋက ပါဠိ+အဋ္ဌကထာ+ဋီကာ+အနုဋီကာ+ မဓုဋီကာ+ ဂဏ္ဍိ+ယောဇနာ များတွင် သိက္ခာပုဒ်ပေါင်း ကုဋေ ကိုးရာကျော် ရှိတယ်လို့ လေ့လာမှတ်သားဖူးပါတယ်..။
ရဟန်းဝိနည်းဟာ သံဃာများရဲ့ အသက် ဖြစ်သလို အပြစ်ရှိပုံ (အဆိပ်) နဲ့ အပြစ် (အာပတ်) ဖြေနည်း(အဆိပ်ဖြေဆေး) များလည်း ပါဝင်ပါတယ်..။ ရဟန်းအဖြစ် ပြန်မရတဲ့ အပြစ် (ဖြေဆေးမရှိအဆိပ်) တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်..။
အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခေတ်စားနေတဲ့နည်းက အဆိပ်မှန်းသိသိချည်းနဲ့ သောက်ပြီး အချိန်မှီ အဆိပ်ဖြေဆေး သောက်နေကြတာပါပဲ. .။ တချို့က ဖြေဆေးမရှိတဲ့ အဆိပ်စားပြီး အဆိပ်ပြေသယောင် လူကြားထဲမှာ သွားလာနေကြ ဟောကြားနေကြတာပါပဲး..း။
လေ့လာလိုသူ လူငယ် ပညာတတ် များအနေနဲ့ ရဟန်းဝိနည်း ၂၂၇ သွယ် ဆဌမူ (မြန်မာပြန်) ကို အောက်ပါလင့်မှာ လေ့လာကူးယူနိုင်ကြပါတယ်…။
Credit to ငရဲသား
သင်ခန်းစာ တစ်ခု မက ရခဲ့ပါရဲ့။
အဲ သီချင်း ကို အတော် ကြိုက်နေတယ် ထင်ပါ့ ။ ဘာပဲ ပြောပြော ၀ီ ကတော့ တနိုင် ငံလုံး မသိ တဲ့ သူ မရှိတော့ ဘူး။ ၊ ခုတော့ ညီး ပေးတဲ့ လင့် မှာ ကြည့် လိုက်တော့ ကမ္ဘာ မှာ ပါ နာမည် ရလာပြီ။
ကို ကျော် သိမ်း
ဘာသာရေး မို့ အရမ်း မပြော ချင် ရင် ဖြည်းဖြည်း ပြော လည်း ရပါတယ် နော။
မဇင်မာအောင် တို့ မရွှေ ဇီး ကွတ် တို့ ခမျာလည်း ဖေ့ ဘွတ်ကလူတွေ ရဲ့ပါး စပ်မှာ ရစရာ ကို မရှိ တော့ ဘူး။ ဒေါ် အောင်ဆန်း ဆု ကြည် တောင် အပြောခံ ရသေးတာ ပဲလေ။ ကျမတော့ ကိုယ့် နိုင်ငံ ကလူတွေ အတော် ထုံလွန်း လို့ စိတ် ဓါတ်တောင် ကျမိတယ်။
ကဘုန်းကျော် ရဲ့ စာလည်း ဖတ်ဖူးတယ်။ သူကတော့ ပြောလိုက်ရင် ပိသာလေး ဘေး ပစ်။ မှန်လွန်းတော့ ခံရတဲ့ လူက သက်သာ မှာ မဟုတ်ဘူး။
ကို ငြိမ်း ချမ်းလည်း ဖတ်ဖူးတယ် ၊ လိုက်ခ် ပေး ဘူးတယ်။ ကို လှိုင်မြင့် ကတော့ သူဘာကို ဆိုလိုချင်လဲ ကျမ သိပ် သဘော မပေါက်ဘူး။
ကျမလည်း တနိုင် ငံ လုံး ကို တစ်အိမ် ထောင် ကလေး ဘယ် နှယောက် ဆိုပြီး သတ်မှတ် မယ် ဆို သဘောတူ ချင်တယ်။
ဗုဒ္ဓတရားတော်ရဲ့ အနှစ်သာရကို လက်ခံလာအောင် ဟောပြော စည်း ရုံး ရ မဲ့ သူများ ဘာသာ အပုတ်ချ တဲ့ နည်း နဲ့ ဟောပြော စည်း ရုံး နေတာတော့ စိတ်ပျက် ပါ့ ။ ခတ်တာက ကျမ တို့ နိုင်ငံ မှာ လူပြိန်း က ပေါတော့ လူပြိန်း ကြိုက် တရားတွေ လွှမ်း မိုးနိုင်တာ မဆန်း သလိုပဲ။
နေတော့ မကောင်းဘူး။ အသက်ရှူ မ၀ လို့ ။ အမှန် မှာတော့ လေကောင်း လေသန့် မရှူ ရတာ ကြာ လို့ စိတ်က တောင့် တ နေတာ နေမှာ။
လင့် အတွက် ကျေး ဇူး ပါ။ အရင် တုန်း က ဖတ်ဖူးပေမယ့် အမှတ် တမဲ့ ပဲ။ ခုတော့ သေချာ ဖတ်ကြည့် တော့ မယ်။
သင်ခန်းစာ တစ်ခု မက ရခဲ့ပါရဲ့။ ဆိုလို့
သာဓု ပါတော် ၊ သာဓု ။ နောက် တစ်ခွန်းတော့ ပြောမနေတော့ပါဘူး ဆိုတဲ့ ဟာ နားထောင်ပြီး မှ ခေါ်တော့ မယ်။
ဒေါ်ဂျီးမိုချိုက ဘုန်းကြီးတွေ မှိုင်းတိုက်တာကြတော့ ခုနှစ်သံချီ အော်ဟစ်ပြောဒယ်.. အင်ဒိုနီးရှားဖက်က မှိုင်းတိုက်တာကြတော့ အဲကွန်းဖွင့်ပြီး ဇိမ်နဲ့ကွေးနေသတဲ့.. အောင်မြလေး.. ကောင်းသေးရဲ့လား အရပ်ဂဒို့.. မာမွတ်ရှာပွတ် အယာတိုလာဦးခိုမ်တူမ လုပ်ပုံ…. :grin:
psi ၄၀၀ ဖြစ် နေလို့ အသက်ရှူ ကြပ် ချင်နေတာတောင် မေ့ သွားတယ်။ ရီ လိုက် ရလို့ ။
ဒါ ….. ခြင်ဂျာဘူ မှာ ဗမာတွေ အများ ကြီး ရှိ မှန်း သိ လို့ ဒီ လူတွေ တမင်ဒဂါ လုပ်တာ ဖစ်ရမယ် …ဟွန်း။
လာအု တို့ နာထု တို့ လေသံ အတိုင်း ရေး သည်။
ရဟန်းဝိနည်း ၂၂၇ သွယ် ဆဌမူ (မြန်မာပြန်) လင့်လေးတင်ပေးလို့ ကေဇက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
မိုချိုတစ်ယောက်အပါအ၀င် “ ခြင်ဂျာဘူ” ကလူတွေအားလုံး အမြန်ဆုံးလေကောင်းလေသန့်ရှုနိုင်ပါစေ
မိုချိုပြောတဲ့ “ တန်ခိုး အကြီး ဆုံး မြတ် စွာ ဘုရား ရှင် က နှလုံးသား ထဲ မှာ ရှိပြီး သား မို့ လို့ ဖြစ်ပါတယ်။”
ဆရာမ မိုးချိုရဲ့ ဘာသာရေးခံယူချက်နဲ့ဘာသာရေးလေ့လာချက်တွေကိုတော့လေးစားမိပါတယ်၊ တကယ့်တကယ်ရင်ထဲမှာသရဏဂုံတည်ထားတယ်လို့ကြားသိရတဲ့အတွက်လည်းလေးစားကြည်ညိုမိပါတယ်။ဒီလိုရင်ထဲမှာသရဏဂုံတည်ထားသူများတွေ့ဆုံဖို့တာခဲရင်းလို့ပါ။ ခုလိုကြားသိရတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက်အားတက်စရာဖြစ်နေလို့ပါ။ ရင်ထဲမှာ အမှန်တကယ်သရဏဂုံတည်ထားပြီဆိုတော့သူနှင့်ဆက်နွယ်သူမှန်သမျှဟာကောင်မွန်လာပါလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မိလို့ပါ။ မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ထဲမှာလည်းသရဏဂုံတည်ထားသူဟာ သံသရာမှာအပါယ်မလားတော့ဘူးလို့ဟောကြားထားတာရှိပါတယ်။ (တကယ်အစစ်မှန်သရဏဂုံတည်သူများသာ) တကယ်တော့ ဆရာမ မိုးချိုလို ရင်ထဲမှာသရဏဂုံတည်ထားသူအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အမျိုးစောင့်ဥပဒေဆိုတာလည်းပေါ်လာစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အားလုံးကရင်ထဲမှာသရဏဂုံတည်ထားကြတော့ဘယ်လိုပဲဘာသာခြားတွေစည်းရုံးစည်းရုံးသရဏဂုံတည်ထားသူဖြစ်လေတော့ယိုင်နွဲ့တဲ့စိတ်မဖြစ်ပေါ်တော့ပါဘူး။ မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုအကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်နေသူဖြစ်နေမှာမို့လို့ပါပဲ။ ယခုတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ကြပဲ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာခံယူကြပြီး ဘာသာတရားကိုသိသလိုနဲ့အတက်ကြီးလုပ်နေကြသူတွေဟာအင်မတန်မှကြောက်စရာဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ (ကိုယ်တိုင်လည်းယခုအချိန်ထိ ထင်သလောက်မသိသေးပါ) ဗုဒ္ဓဝါဒဟာ လွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဝါဒပါ၊ မည်သူမဆိုလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်နိူင်ပါတယ်၊ မချုပ်ချယ်ပါဘူး။ ဘုရာရှင်ကိုယ်တိုင်က လာပါ၊ ရှု့ပါ၊ ကျင့်ကြံပါ ဟုဖိတ်ခေါ်ထားတာမဟုတ်လား။ နောက်တစ်ခုက အရင်ဆုံးလေ့လာပါ၊ လေ့လာပြီးရင် သိအောင်လုပ်ပါ၊သိပြီဆိုလျှင် ကျင့်ကြံပါ။ ဒါဟာဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်တွေပါပဲ။ လေ့လာပြီးရုံနှင့်မသိသေးပါ။(ကိုယ်တိုင်ပင်လျှင်လေ့လာရုံအဆင့်ရှိပါသေးသည်) ကိုယ်ပိုင်အတွေးတွေနှင့်ဘာသာတရားကိုမဝေဖန်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေဟာနက်နဲခက်ခဲလို့ပါပဲ၊ကိုယ်ရဲ့ပုထုဇဉ်အတွေးလေးတွေနဲ့တရားတော်တွေဝေဖန်ခဲ့ရင်အမှားတွေပါသွားစိုးရိမ်လို့ပါ၊(ပုထုဇဉ်သာဆိုလိုရင်းဖြစ်) မသိနားမလည်သောသူတွေအတွက်ပြောရခြင်းမျိုးသာ(ကျွန်ုပ်တို့လိုလူမျိုးတွေဆိုလို)အခုဖြစ်နေသောကိစ္စကဘာသာရေးလည်းဖြစ်သလိုအမျိုးသားရေးဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ ဝေဖန်တာ ထောက်ပြတာကိုလက်ခံပါတယ်။ ဝေဖန်တဲ့နေရာမှာ လုပ်ရက်ကိုမကြိုက်လို့ဝေဖန်တာလား၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝေဖန်တာလား၊ ဘာသာတရားကိုဝေဖန်တာလား၊ တရားတော်ကိုဝေဖန်တာလား၊ သံဃာကိုဝေဖန်တာလာဆိုတာကိုကွဲစေချင်တယ်။ ကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာမချုပ်ချယ်ပါဘူး၊ လွတ်လပ်စွာကိုရွေးချယ်ပြီးကိုးကွယ်ပါ။ သင်္ကန်းဝတ်ရုံထားတိုင်းကိုးကွယ်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ ကိုယ်ကြိုက်မှကိုးကွယ်ပါ။ ဒါပေမယ့်သင်္ကန်းရုံထားရင်တော့ ဦးချသင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်္ကန်းဟာအရဟဓဇထိုက်လို့ပါပဲ၊ သင်္ကန်းရုံထားတဲ့သူကိုဦးချမိလို့ငရဲမကြီးပါဘူး၊ ဦးချသူမှာသာကုသိုလ်ရပါတယ်၊ ဦးချခံရတဲ့သူအတွက်သီလမစင်ကြယ်ရင်တော့ အပြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူ သင်္ကန်းရုံထားသူတိုင်းကိုသံဃာလို့မပြောလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သင်္ကန်းရုံထားသူကိုတော့ သံဃာမဟုတ်ဘူးလို့သွားပြီးမစွပ်စွဲလိုက်ပါနဲ့၊ ပြောခံရသူက သံဃာအစစ်မဖြစ်ရင်ဘာမှမဖြစ်ရင်ပေမယ့်အစစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သံဃာဖြစ်ခြင်း မဖြစ်ခြင်းဟာဝိနည်းတရားတော်နှင့်သာဆုံဖြတ်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေလို့ပါ၊ အပြင်ပန်းကြည်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး။ သံဃာတစ်ပါးဟာ ပါရာဇိက ၄-ပါးမကျသေခြင်း၊ သိက္ခာမချရသေးဆိုလျှင်သံဃာဖြစ်နေတုန်းပါ။ သိက္ခာချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း သူတပါးက အတင်အဓမ္မချပေးလို့ မရပါဘူး မိမိကိုယ်တိုင်က သိက္ခာချချင်သောစိတ်ရှိမှသာလျှင် သိက္ခာကျတာပါ။ ဆရာမ မိုးချို ပြောတဲ့ ကျမရဲ့ အရင် ပိုစ့် မှာ ဘယ် ဘုန်း ကြီး ကို မှ ဆဲ တာ မပါ ခဲ့ သလို သံဃာ မဟုတ်တော့ တဲ့ သူ ကို ဝေဖန်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဆိုတာလေး တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါဟာ ဘယ်လိုသံဃာကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာလည်းမသိ၊ ဒါမှမဟုတ် သံဃာမဟုတ်သောသူတွေကိုဝေဖန်တာလို့ပြောတာလားမသိလို့ပါ။ အဲဒါမှမဟုတ်ပဲ သံဃာမဟုတ်တော့တဲ့သူကိုဝေဖန်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင် အဲဒီသံဃာ သိက္ခာချတာ သိက္ခာကျတာ ဆရာမ မိုးချို သိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုသိတယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာမပြောတဲ့စကားက မှန်ကန်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သံဃာ အချင်းချင်း ရန်တိုက် ပေး ပြီး သင်းခွဲ ခြင်း လို့ ကို ဇွဲ မာန် ဆို ခဲ့ တာ ကို ပြန် ရုပ်သိမ်း စေ ချင် ပါတယ်။ ဆိုတာလေးပါ။ ကျွန်တော် ဆရာမကို အဲဒီလိုမပြောမိခဲ့ပါလား။ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ကွန်မန့်ကိုသေချာဖတ်စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ကွန်မန့်ထဲမှာ ကျွန်တော်ကြိုက်မိသောပိုစ့် ဆိုတာလေးပါတယ်လေဗျာ။ ဒါက ကျွန်တော်ရေးတဲ့ကွန်မန့်ပါ ရေးသားသူရော ဝေဖန်ကြသူတွေရော အားလုံးကောင်းကြပါတယ်၊ ခု ဒီဂယက်က တော်တော်လေးကိုကြီးထွားနေပြီ၊(အပြင်မှာတော့ ထင်သလောက်မဟုတ်)ရေးသာကသူ့အမြင်သူ့ခံစားတွေသူ့တွေ့မြင်ခဲ့တာတွေကို အလိုမကျခြင်းဒေါသတွေနှင့်ပေါင်းစပ်နေတယ်လို့မြင်မိပါတယ်။ အမှန်တော့ ဥပဒေပြဌာန်းတယ်ဆိုတာလူတွေကိစ္စပါ၊မှန်ပါ၏။ လူတွေပြဌာန်းတဲ့ဥပဒေဟာလောကီရေးရာမှာသုံးတဲ့စည်းတစ်ခုလို့မြင်မိပါတယ်။ ရဟန်းကိစ္စ၊ရဟန်းဥပဒေသဆိုတာ ဘုရားရှင်ပြဌာန်းခဲ့တာပါ။ ခုကိစ္စမှာ လူတွေပြဌာန်းရမည့်ကိစ္စတွေပါ၊ဒါဆိုရဟန်းတွေကဘာလို့လုပ်နေတာလဲလို့မေးစရာရှိနေပါတယ်။ ဒါကရိုးရှင်းလေးတွေးကြည့်ရအောင် ရဟန်းဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပါ။ များသောအားဖြင့်လူတွေမြင်ကြတာဟာ ရဟန်းဆိုတာ စာပဲလုပ်သင့်တယ်။ တရားပဲအားထုတ်သင့်တယ်လို့မြင်နေကြတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ အဲသည်လိုမဟုတ်ပါဘူး။
အောက်က ပို့စ့် ကျွန်တော်ရေးသာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်ကြိုက်တာလေးကိုမျှဝေတာပါ။ အဲဒါကြောင့် ကို ဇွဲ မာန် ဆို ခဲ့ တာ ကို ပြန် ရုပ်သိမ်း စေ ချင် ပါတယ်။ ဆိုတာက ရုပ်သိမ်းစရာလိုမယ်မထင်တော့လောက်ပါဘူးနော်။ (အစကတည်းက မပြောခဲ့လို့ပါ)
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဖြစ်ပြီးရင် ပျက်ရ မယ့် တရား ကို ဘုရား ရှင် တောင် လွန်ဆန် တော် မမူ ခဲ့ တဲ့ အတွက် အချိန် တန်ရင် တော့ပျက် ပါလိမ့် မယ်။ အဲဒါဟာ လက်ခံပါတယ်၊ ဘုရားစကားဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုစိတ်သာရှေးရှေးသောသာသနာတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသောဆရာတော်တွေ ထားကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တတွေ မြတ်ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေနဲ့တွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဖြစ်ပြီးရင်ပျက်ရမယ့်မှန်ပေမယ့်ပျက်ချိန်တန်မကျသေးဘဲပျက်မသွားရလေအောင်စောင့်ရှောက်ရမှာလေ။ အဲဒါကြောင့်အမျိုးဘာသာသာသနာကို ပျက်ချိန်တန်မပျက်ရလေအောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးစောင့်ရှောက်ကြရအောင်။